Wiilkii Mebe Ngo'o ee u dhashay Canada - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Wiilkii Mebe Ngo'o oo u dhashay dalka Canada
Wiilka Mebe Ngo'o ayaa u dhashay dalka Kanada
Si aad u rumaysatid Cameroonian Paul Chouta, ilaha wargalinta, tilmaamee in Lionel NKoulou ESEM, ina a of Wasaaraha hore ee gaashaandhigga (Edgar Alain Ngo'o ESEM), tababarka saldhigga diblomaasiga ah ee xafiiska ra'iisul-wasaaraha waxaa jooga Canada.
Indeed, mid ka mid ah oo ka fadilnaa saaxiibtiisa Paris laba bilood ka hor looga shakiyay kutaala eedeeyey ee la xidhiidha kiis (ilaa xeer ee TCS) bixinta khayaal ah pares jaakadaha xabada in Wasaaradda difaaca ee ku saabsan 700 million FCFA, co-tallaabo ula kabtankii hore ee gabayga Indomitable Lions Rigobert ku BAHANAG, bidix Cameroon on Monday April 08 2019 Cararid ganacsi ee SN Brussels Airlines ku duulaya in Cameroon.
Lionel MEBE NKOULOU wuxuu haystaa shahaadada Master's 2 ee xiriirka caalamiga ah ee Jaamacadda Iric ee Yaoundé 2
Waxa uu yimid Berlin Jarmalka subaxnimadii Talaadada waxaana uu galabta galabnimadan ku tagi doonaa Montreal in Canada laga yaabo in uu yahay muwaadin.
Kanada waa dal soo dhaweeyay qaxay Caddaalad Cameroon, dalka, sababta oo ah non-xubin ka Network Booliiska Caalamiga ah (Interpol) ayaa waxa ay adag tahay in la gobolada qaarkood ka shaqeeyaan nidaamka celintiisa hoos cover 'Interpol. Si kastaba ha ahaatee su'aasha ay weli ayaa eryay ina Mebe Ngo'o, magacaabay Mebe Nkoulou Lionel?
Mail: [Email ilaaliyo]
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://lewouri.info/derniere-heure-un-fils-de-mebe-ngoo-en-fuite-pour-le-canada/
"Nidaamku wuu ku fashilmay (...) U sheeg Paul Biya"
Baarlamaanku wuxuu qeexayaa sharciga tirada xubnaha golaha deegaanka